ရန်ကုန်ရောက် မိုးသီးဇွန်သို့အရေးပေါ် အကြောင်းကြားစာ ( အောင်ဝေး ) | Freedom News Group
by FNG on September 6, 2012	“ အနှစ်(၂၀) မျှ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်လာပြီးနောက်
ကျနော်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်၍ကြည့်လိုက်သောအခါ
တွေ့ ရလေသည် “
( ကာနယ် ချစ်ကောင်း )
အစ်ကို့ ဓား မတုံးဘူး ဆိုတာလည်း
အခုတော့ တို့ ဓားတွေ
အဝေးရောက် သားတစ်ယောက်ရဲ့ 
တောကြီး မီးရှို့ ဖို့ 
အေးတိ အေးစက်နဲ့ ပါလား။
ကိုယ် လျှာနဲ့ လျက်ပြီး ပြန်ခဲ့တော့။
သတင်းထောက်မ တစ်ယောက်ရဲ့ မေးခွန်းကို
မင်းရဲ့ တချို့ ကောင်တွေလို
” ငါလာတယ်၊ ငါမြင်တယ်၊ ငါအောင်ပွဲခံတယ်“
အခုလို ရန်ကုန်မှာ စော်ကားခံဖို့ လား။
အခုလို ရန်ကုန်မှာ လှောင်ပြောင်ခံရဖို့ လား။
နိုင်ဝင်းဆွေတို့ ၊ ဖဒိုမန်းရှာတို့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မြတို့ နဲ့ တွေ့ ခဲ့တာ
အခုလို ရန်ကုန်မှာ နှပ်ပစ်ခံရဖို့ လား။
ဘယ်တော့မှ ညီညွတ်ရေးကို မဖြိုခွဲဘူး။
ပြည်ပက လှုပ်ရှားမှုတွေကို မလိုဘူးတဲ့လား။
အထဲမှာရှိသေးတာ ဟုတ်ရဲ့ လား။
ခွေးသေ ၀က်သေ ထားခဲ့တော့။
တစ်သက်လုံး အတူနေသွားကြတာပေါ့ ကွာ။
ငါ ရိုရိုသေသေ သင်္ဂြိုဟ်ပေးမှာပေါ့ ။
မင်း သင်္ဂြိုဟ်ပေးပေါ့ ။
အဲဒီ ဦးသန့် ကျွန်းလေးပေါ်မှာ
“ ဆဋ္ဌမ ဗမာနိုင်ငံတော် “ ဆိုပြီး
From: ရသ ကဏ္ဍ	← FBI ကွန်ပျုတာ ထဲ မှာ Apple သုံးစွဲ သူ တို့၏ ID သန်း ကျော် ကို ဟက်ကာ တွေ ရရှိ
ကြေးနီ စီမံကိန်း ၏ ” ဘ၀ ဆက် တိုင်း အာဏာ ရှင် စနစ် အောက် တွင် လူမဖြစ် ပါရစေ နှင့် ” လှုပ်ရှား မှု အခြား ဖိနှိပ်ခံ ဒေသများ သို့ကူးစက် နိုင် →
September 10, 2012	SOS Myanmar	#
မိုးသီး နိုင်အောင် မတူတာတွေကဒါပဲ
မိုးသီး ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လမ်းမကြီးပေါ်က လာတယ်
ကျောင်းသားတို့သဘာဝ စွာတယ် ကျယ်တယ်
မိုးသီးနောက်မှာ ရှိနေတာ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
လက်ရဲဇက်ရဲ တိုက်ရဲသူတွေက အများသား၊
ရီးပဲ.. မိုးသီး မင်းဘက်မှာငါရပ်တယ်
မိုးသီးဘက်မှာငါရပ်တယ် ဆိုတာမှာ နှစ်ခုထဲကတခုကိုလက်ခံရမယ်ဆိုရင် မိုးသီးကိုလက်ခံမည်ဟုကျနော်၏အယူအဆမျှသာဖြစ်ပါသည်
September 8, 2012	cutpli	#
ရသစုံ..ပါပဲ..အလွမ်း၊အကြမ်း၊အရမ်း၊အဆဲ၊ဟာသ comment ပေါင်းစုံကို ဖတ်ရလို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…း)
September 7, 2012	chochoshein	#
အစစ စိတ်မကောင်းပါ ဒီလိုမဖြစ်သင့် ကဗျာဆရာကြီးအတွက်လဲစိတ်မကောင်းပါ အကုန်ခုတ်ရာတခြား ရှရာတလွဲတွေလိုဘဲ ခံစားမိ မြန်မာပြည်နှင့်ဝေးသောသူတိုင်း မြန်မာမဟုတ်သလိုဘဲခံစားမိလို့ အမေစုကို အများကြီး အားကိုးမိပါသည်
၁၉၇၂-၇၃ မှာ တက္ကသိုလ်ရောက်တာမို့ အရေးအခင်းတွေ အများကြီးကြုံခဲ့ပါသည် ။ အမေစုကိုဘဲယုံပါသည်။
September 7, 2012	aungminluexxx@gmail.com	#
ငါ့ အကို နဲ့ သူ့အဖေ ငါတို့ညီ တွေ နဲ့ သူတို့ အကို တွေ ငါတို့ အမျိုး ငါတို့ပြည် အတွက် အသက်ပေးလို့ စတေး ပြီး ပြီး လေပြေ လေညင်းတွေ အတွက် မုန်တိုင်းတွေကို ပေးဆပ် ပြီးပြီ ၊သာယာ ချိန်မှာတော့ မင်းတို့ ကောင်တွေက ရီးပဲ မိုးသီးဇွန် ရီးပဲ။
ရီး ပဲ အောင်ဝေး ရီးပဲ ၊ ခုံ ဖိနပ် ကို တံဆိပ်တပ် ၊ မင်းကိုမင်း aerosoft တဲ့ ၊ လဒ ဆို တာ မိုးသီး လိုပဲ အညှီ နဲ့ လောက်ကြိုက်တယ် ၊ ရီး ပဲ အောင် ဝေး ရီးပဲ ABSDF ဆိုတာ လူမိုက် မျက်ကန်းတွေ နဲ့ ဖွဲ့ စည်း ခဲ့တာ အတောင် တောင် မတက်ရသေးဘူး ဟန်ရေး ပဲ ပြတတ
်တယ် ၊ ရီးပဲ အောင်ဝေး ရီးပဲ မာနယ်ပလော ၊မယ်သဝေါ နဲ့ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲစေချင်တဲ့ ကောင်တွေ ရီးပဲ အောင်ဝေး ရီးပဲ ၊
September 7, 2012	အာလ၀ီး	#
ရန်ကုန်ရောက် မိုးသီးဇွန်သို့ အရေးပေါ်အကြောင်းကြားစာ (အာလ၀ီး)
သူများတွေ သေးပေါက်ထည့် ကြပြီ။
လေဆိပ်မှာ ကားပေါ် မင်းတက်ပီး ဘဲလေးက ကတာကို
အဆီဘူးခါတယ်ဆိုပီး ၀မ်းပန်းတသာ ကြို ကြမှတော့
၂၄ နှစ်ကြာ သရဲဘောကြောင်ကြောင်နဲ့ 
ပတ်ပြေးနေတဲ့သီလကြောင်တယောက်ရဲ့
၅၀၀၀ ပေးပီးခေါ်လာတဲ့ သူတွေနဲ့
ရက်လည်ဆွမ်းကြွေးတရားနာလာတဲ့မသာလိုပါလားကွာ။
ဦးသိန်းစိန်ကို ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်ဘို့ 
သူများမယား ကြာခိုဘို့ 
ငါ့ စော် ကိုထပ်ကားကြတော့မယ်။
ကိုယ် လျှာနဲ့လျက်ပြီး ပြန်ခဲ့တော့။
ဘီယာမော့ ပီး လာတဲ့သူကို
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ဆီ ပြန်တဲ့သူကို
၂၀၁၂ က လက်မခံတာ့ ပြီ။
ငါတို့ လို ကြောက်လို့ ပတ်ပြေးနေတဲ့ သူတွေ
၂၄နှစ်လုံးလုံး စောက်တလွဲလုပ်ခဲ့ သမျှ
ဆမူစာရောင်းဘို့ သွားတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
မင်းကိုအရူးလုပ်နေတဲ့ဦးအောင်မင်းဆီကိုပဲ။
ဖေ့ စဘုတ်ပေါ် တင်ကြတော့မယ်။
မင်းလို ရှစ်ဆယ့်ရှစ် သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ကောင်
မင်းလို ကျောင်းသားချင်းသတ်တဲ့ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း
၂၀၀၇ သံဃာအရေးနဲ့ရှောင်ပြေးသွားလို့ 
မယ်သီလရှင် ၀တ်ခိုင်းကြတော့ မှာ
ဂူဂယ်ဘလော့ ပေါ်က နိုင်ငံရေး။
ကြမ်း ၇ချောင်းဘဲရှိတဲ့ အိမ်က
အခုလို ရန်ကုန်မှာ တာလဘောဟင်းစားရဖို့လား။
ရန်ကုန်က ခွေးတွေတောင်အနားလာ မသီဘူး။
နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာကြီးမှာ မပါဖူးဘူး
နောက်ဆို အကြွေးမရောင်တော့ ဘူးတဲ့ညီလေးရာ။
၂၄နှစ် ပြည့် ဆွမ်းကပ်ပေးကြတဲ့ အကြောင်း
ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ဖင် ကိုယ်ပြန်မနမ်းဘူး။
ဘယ်တော့မှ ရဲစခန်းရှေ့ ဖြတ်မလျှောက်ဘူး။
ကောင်မလေးက အသစ်လေးဆိုပေမဲ့ 
မန္တလေးမှာ ၆လ မော်လမြိုင်မှာ ၆လ
နေ့ တိုင်းနေ့ တိုင်း
ပန်းကုန်းလာလာစွပ်တဲ့ သူတွေကို လေးစားတယ်လား
မင်းရဲ့ အုတ်ဂူကို ဆေးအသစ်လေးသုတ်ထားလိုက်ကြပြီ။
ဖင်တု ရင်တုတွေနဲ့ထားခဲ့တော့။
မသာယုတ် နင်သွားလိုရာသွားနိုင်ပီ ပြောပေးဦး
အဲဒီ ဦးသန့် ကျွန်းလေးပေါ်မှာ
အလာဟို အရှင်မြတ် အမိန့် တော်ပေးပါ
September 7, 2012	ရဲမေကြည်	#
September 7, 2012	sai	#
September 7, 2012	Zaw Myo Thu	#
ကို့ဂုဏ်ကိုဖော်ချင်တာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုအော်ဆဲတာကတော့ ဆရာလိုတော့ရိုင်တက်ပါတယ်မရိုင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာသိထားဖိုက(ဆရာပြောသလို)တသက်လုံးကောင်းပေမဲ့တခါမှားရင်မှားတာပါပဲအမှားကိုကိုမိုးသီးမလိုအမှန်ပေးလိုမရပါဘူးအဲဒီဟာကိုပဲရှင်းပါရန်ကုန်ကလူတွေ သတင်းထောက်မတွေ facebook ပေါ်ကလူတွေကိုမရမ်းပါနဲ(ကိုမိုးသီးပြောသလို)တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူကလေတိုက်ခံနိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးစံပြဖြစ်နေရမှာပါ
September 7, 2012	kyaw kyaw moe	#
အနာခံတာ အသာစံဖို့လို့ မတွေးပါနဲ့
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး… စသည်…
တို့ဆိုတာ… ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း
” ငါလာတယ်၊ ငါမြင်တယ်၊ ငါအောင်ပွဲခံတယ်
ဂျူးလိယက်ဆီဇာ ကတော့ပြောတာပဲ” တဲ့
September 7, 2012	zenith	#
နယူးယောက်မှာ ဦးသိန်းစိန်ကို ငါနဲ့ ကိုင်တုတ်ပြီး ဆဲခဲ့တာ ဒီမိုကရေစီ ရဖို့တဲ့လား… ဟားဟားဟား…အဲ့လိုဆဲတာကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကဗျာစပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုတယ်တဲ့လား… ချီးကျူးပါတယ်… အရင် ခင်ဗျားကဗျာတွေ ကြိုက်ခဲ့တာတောင် သဲထဲရေသွန်ပဲ…
September 7, 2012	Zizawar	#
သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ကိုရေးတဲ့နေရာမှာ ကိုအောင်ဝေးရဲ့ အဝေးရောက်အမြင်ကလည်း မှန်နေပြန်ပါတယ်၊ တယောက်ကဖဲ့ရင် နောက်တယောက်ကပြန်ခဲ့ကြမှာပါပဲ၊ တကယ်ဆိုရင် သမိုင်းကို ဘာမျှကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးနေပုံရှိတဲ့ ဂျနယ်မလေးတစ်ယောက်က ဖွလိုက်တဲ့ ဗုံးတစ်လုံးလိုပါပဲ၊ ဗုံးစတွေက ကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်လုံးဆီကိုလွင့်စင်သွား ခွဲလိုက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထိပြီဆိုပါတော့ သင်ခွဲတဲ့ဗုံးအသုံးကျရဲ့လား ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်မေးပေတော့ဗျာ
September 6, 2012	shwetunlu	#
zizawar အကြီးကြီး မှားတယ် ဒေါ်မေသင်္ကြန်ဟိန်း ဖွလို့ မဟုတ်ပါ။ေ၇ဆုံးေ၇ဖျား လေ့ လာပါ။ ၇ဇူလိုင် ကိစ္စမှာ ဒေါ်သင်္ကြန် ဘယ်လို တုံ့ ပြန်ခံ ၇လဲ သိလား။ ဒီဆောင်းပါးလောက် ဖတ်ပြီး ပြောတဲ့ လူတွေ ၇ှိချင်၇ှိပါလိမ့် မယ်၊ သိပ်အများကြီးတော့ မဟုတ်။
September 7, 2012	kok	#
မင်ဟတ်တန်ရောက် အောင်ဝေးသို့ အရေးပေါ်အကြောင်းကြားစာ ( မာဃ )
ရန်ကုန်ဟာ မထူတော့ဘူး ကိုအောင်ဝေး
ရန်ကုန်ဟာ မအတော့ဘူး ကိုအောင်ဝေး
ရန်ကုန်ဟာ မတုန်း တော့ဘူး . . .
ကျနော်ဟာ ကိုမိုးသီး လို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားမဟုတ်ဘူး
ကျနော်ဟာ ခဗျားလို နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံရေးကဗျာဆရာကြီးမဟုတ်ဘူး
ခွပ်ဒေါင်းအရှင်လတ်လတ်ကိုတောင် ၂၀၀၇ မှာမှ မြင်ဖူးခဲ့တာ
ဒါပေမယ့် အေဘီမြောက်ပိုင်း အာဏာသံဝေဂ တွေက
ဖတ်ရသမျှ ရင် ကို ဓါးနဲ့ဆွတယ် . . .
ခဗျားပြောတဲ့ ဥက္ကဌကြီးပါ ဆိုတဲ့ ကိုမိုးသီးကလွဲချ
ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်ခြေမွလိုက်ရအောင် ပုရွက်ဆိတ်တွေမဟုတ်
သတ္တိသွေး စွေးစွေးနီတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းတွေ . . .
လူထောင်မချီတဲ့ အေဘီကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်
အဖမ်းခံ အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ လူတစ်ရာကျော်ဟာ အစိုးရသူလျို တဲ့လား
အသနားခံသူတွေကို ဇက်ဖြတ် လက်ဖြတ် ခြေဖြတ်
ကိုမိုးသီးလိုလူကို တာဝတီသာ ကိုတင်ရက်
ဒီမှာ ကိုယ်လူ ကိုအောင်ဝေး
ဟောဒီလောကမှာ သူရဲကောင်းဆိုတာ ရေတွက် မရဘူး . . .
ဒီကိစ္စနဲ့ ကိုမိုးသီး ဘာမဆိုင်ရင်
ကျနော်တို့ရဲ့ ဥက္ကဌကြီး ဘာပြောခဲ့သလဲ
ထချ ဖို့ လက်နက်တွေစု ကြပါ ဟုတ်လား
အဲ့ဒီလို လူမျိုးကိုမှ အက်ဆစ်နဲ့မပက်ရင်
ရန်ကုန်ကလူတွေ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ဓါးနဲ့လှီးပစ်မယ် . . .
လုပ်စားစရာမရှိတော့လို့ ဂွင်သစ်ဖန်တာလား ဆိုတာ
ခဗျား ဘယ်လို အာမခံမလဲ
မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ အဆင့်မြင့်သူတောင်စားခေတ်က ကုန်သွားပြီ . . .
အေဘီက သွေးညှီနံ့တွေကို အရင်ဆေးခဲ့ကြ
ထပ်မသယ်နဲ့ . . . ထပ်မသယ်လာခိုင်းနဲ့
ခဗျားရဲ့ အချောင်သမား သူရဲခေါင်းကို
မန်ဟက်တန်သာ ပြန်ခေါ်သွား . . .
September 6, 2012	-- --	#
ဟုတ်တယ် ကိုမိုးသီးရေ — မြန်မြန်တာ ပြန်လိုက် — ဟိုဒေါက်တာအောင်နိုင်ဆိုတဲ့လူကော ခေါ်သွားလိုက် — ခင်ဗျားတို့လို့ စစ်အာဏာရှင်မုန်းတယ်ဆိုပြီး စစ်အာဏာရှင်စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေ ကျူပ်တို့နိုင်ငံက အလိုမရှိဘူး –
September 6, 2012	ချောချောကြေးမုံ	#
စစ်ဆိုရင် ရေတောင် စစ် မသောက်ချင်လောက်အောင် အရမ်းမုန်းတယ်။
စစ် ဆိုတာ ဘယ်သူတွေ အတွက်မှ မကောင်းဘူး။ဘ၀တွေ စတေးရတယ်။
နှလုံးသားတွေ နာကျဉ်းရတယ်။မြန်မာပြည်ကို ဆင်းရဲမွဲတေအောင်။ပြည်သူတွေ အောက်ကျနောက်ကျ မျက်နှာမွဲရအောင် …..
တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲ ချခဲ့တဲ့ ……အဓိကရန်သူ နေ၀င်း။သန်းရွှေ ။ခင်ညွှန့် အပါအ၀င် အလီဘာဘာ နှင့် အဘ ၅၀၀ ကျော် တို့ကတော့ အခုထက်ထိ….
…နုရင်ဘတ် ခုံရုံ မရောက်သေး….ခုံရုံးမတင်နိုင်သေးတဲ့ အပြင်………
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး….. မန္တလေးတစ်မြို့လုံး….. ကားစီး..တိုက်ဆောက်နေတာ …တရုတ်။ကုလား…. နဲ့ စစ်တပ်က အလီဘာဘာတွေဘဲ…..
ထောင်ထဲဝင်တဲ့သူက၀င်။တောထဲရောက်တဲ့သူကရောက်။ အနစ်နာခံနေရဆဲ က ၈၈ မျိုးဆက်တွေ….
တ်ို့ ၈၈ ကျောင်းသား သွေးသားရဲဘော်တွေ အချင်းချင်း မပြေလည်မှုတွေ ရှင်းနေရတာ ရာဇ၀င်ရိုင်းလိုက်တာနော်။
ပြည်သူဟာ ကျေးဇူးကန်းတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၄ နှစ်ကြာ ပြည်ပ မှာ အတိုက်အခံ လုပ်လာတဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို လာကြိုတဲ့သူတွေ
မြန်မာပြည်မြေကြီးကို စရောက်ရောက်ခြင်း ကားခေါင်မိုးပေါ်တွေတက်။
fly kiss တွေပေး။ ရာဇာနေ၀င်းလိုလို။ ကျော်ဟိန်းလိုလို ။ပုံစံတွေ ဖြစ်သွားလို့သာ။
လူငယ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက သမိုင်းကြောင်းကို ကျေးဇူးမတင်ကြတော့ဘဲ။
ဘာကောင်ကြီးလဲကွ. ။ဘယ်လိုပုံလဲကွ ။ဆိုတာ မျိုးဖြစ်သွားရတာ။
ဒီထဲ မှာ ရောက်ကထဲက ကြောင်လျှာသီးက မချွတ်။ ၈၈ ရုံးခန်းမှာ ဖိနပ်ကမချွတ်။
ယုဇနဟိုတယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ အလံရှုးမေးခွန်းတွေက ၀င်လာ။
သတင်းသမားတွေက မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းမေးမရတာမျိုး။
အချိန်ကိုက် ပြည်တော်ပြန်လာချိန်မှာ …အချိန်ကိုက် … မြောက်ပိုင်းက အရိုးတွန်သံက ကြားရ။
ပြည်သူတွေက လဲမအအောင် သမိုင်း သင်နေတဲ့ အချိန်…
ဘယ်သူဘာကောင်လဲ။ ဘယ်လိုတွေလဲဟ ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေထုတ်လာ။
ဒီကြားထဲက ABSDF က နှစ်ခြမ်းကွဲ…ဒီတော့ ပြည်သူက အကြည်ညိုနဲ…..
စစ်အာဏာရှင် လူစုက တော့ ၀မ်းသာတာပေါ့….ဒီလို မျိုးဖြစ်ရပ်တွေကို….
တကယ်တမ်းမှာ….ဘောလုံးပုတ်လွှဲမချဘဲ. .ဒေါက်တာအောင်နိုင်တို့။ကိုမိုးသီးဇွန် တို့က
ပြတ်ပြတ်သားသား .မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ကို သေသေချာချာ ဖေါ်ထုတ် ဖို့ အရင် ကြိုးစားသင့်တယ်။
အဲ့ဒီ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်တုံးက ကျွန်တော် မရှိပါဘူးလို့ ခေါင်းမရှောင်ဘဲ ….
အဲ့ဒီ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်တုံးက တာဝန်ကျတဲ့ သူတွေ စာရင်းကို ဖေါ်ထုတ်..
ဒါတွေ လုပ်ပြီးမှ…ဒီလိုကြိုးစားပြီးမှ ပြည်တော်ပြန်လာလို့ရတာဘဲလေ….
အဝေးရောက် ၈၈ ကျောင်းသားမျိုးဆက် များ ။
ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းများ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိရောက်ရှိနေကြသော ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည့်ဒေါက်တာနိုင်အောင်။ ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် တစ်ကွ သက်ဆိုင်သူများ။
စစ်ဆိုရင် ရေတောင် စစ်မသောက်ချင်လောက်အောက် မုန်းတီးပါတယ်။
၈၈မှာ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နှလုံးသားမှာ ဝေဒနာများစွာရခဲ့ပြီးပါပြီ။တို့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ ခွပ်ဒေါင်းသမိုင်း မှာ စိတ်ဒါဏ်ရာ တွေ ထပ်မရစေချင်ပါဘူး။
မြောက်ပိုင်းက အရိုးတွန်သံကို ကြားလာရတဲ့ အခါမှာ ….
ညှင်းပန်းနှိပ်စက် အနိုင်ကျင့်မှု တွေကို အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာ မိလို့သာ….
ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ကော။၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူတစ်ဦး အနေနဲ့ကော…..
အမှန်တရား ကို တကယ်သိချင်မိပါတယ်။
တောထဲတောင်ထဲ မှာ ဘ၀တူ ရုန်းကန်ပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြတဲ့ အချိန်…
တကယ်ဘဲ ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်။
မြောက်ပိုင်းအရိုးတွန်သံ ကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ မှာ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မှားယွင်းစွာ စီရင်ခဲ့မိတာလား။
စစ်အစိုးရက ၈၈ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် သပ်ရှိုတာ ခံလိုက်ရတာလား။အတွေးပေါင်းများစွာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ABSDF ကျောင်းသား တပ်မတော် သောင်းချီ မရှိလောက်ဘူးလို့ ယူဆလို့….
အဲ့ဒီကိစ္စ တွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တုံးက … မသေဘဲ ကျန်နေသေးတဲ့ ရဲဘော်တွေ အခုချိန်ထိ သက်ရှိထင်ရှား……ရှိကိုရှိမှာဖြစ်လို့။သမိုင်းအမှန်ကို တကယ်သိချင်လို့….ခွပ်ဒေါင်းတွေ သမိုင်း အပေါစား အဖြစ်မခံနိုင်လို့…
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိုနှိုင်းတာတွေ။
သမ္မတနဲ့လက်တွဲလုပ်တာတွေ…. နောက်မှဆက်လုပ်လို့လဲ နောက်မကျသေးပါဘူး။လက်ကျန်လွတ်မြောက်ရဲဘော်တွေရယ်။
နောက်ကြောင်းပြန် ဖြေရှင်း ဖေါ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
မြောက်ပိုင်းက အရိုးတွန်သံရဲ့ ……သမိုင်းအမှန်….အဖြစ်မှန်တွေ ကို
ကာယကံရှင်တွေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတုံးမှာ
အမှန်တရားကို သိရရင်ပြည်သူတစ်ဦး အနေနဲ့ကော။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူတစ်ဦး အနေနဲ့ကော။ကျေနပ်ပါပြီ။
ဆူးနစ်ဝင်နေတဲ့ ညှောင့်လေးတစ်ခုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
September 6, 2012	aye	#
မအောက်မေ့ပဲ သတိထားဆင်ခြင်၊ ပြုမူဆက်ဆံတတ်မှ
နွေးထွေးမှု၊ မျှော်လင့်မှု၊ ရင်းနှီးမှုတွေက ဖော်ရွေမှာပါဆရာ..။
ဘယ်လောက်ပင် ကမ္ဘာတွင်အောင် မြန်မာ့အကျိုးကို
ရွက်ဆောင်ပေမယ့်၊ (ဥပမာ ပြောရရင်..သိန်းသန်းထောင်ချီလှူနေလည်း
စစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတီးတာတွေ တူပေမယ့်၊ မတူတာလေးတွေက
မြန်မာတွေရဲ့ ပင်ကိုယ် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု အငွေ့အသက်ပေါ့။
စောင့်ထိန်းပြုမူရမဲ့ ကျင့်ဝတ်ပေါ့။ သေ၀ပ်ရမယ့် မြန်မာ့သဘောပေါ့။
ဆရာက လူကိုခွေးသတ်တယ်လို့ ပြောတော့..။
မြန်မာပြည်သူအများစုက ခွေးလို့ ဆရာစကားကို ကျနော်
ဘာသာမပြန်ရဲပါဘူး။ ဆိုလိုသူရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိဖို့
ကျနော်ဆရာ့ရင်တွင်းဆူဝေမှုကို ကျနော်နားလည်တယ်။ ဆရာ့
တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာအမှန်ကြောင့် မြန်မာပြည်သူကို
ဆရာ့လို မြန်မာမှု၊ မြန်မာကျင့်ဝတ်နဲ့ ရိုးဖြောင့်သူအတွက်
အိမ်ပြန်လမ်းခရီးက နွေးထွေးမှုရှိနေမှာပါ..။ “
September 6, 2012	sai	#
လူတွေနဲ့ဝေးသလို
မြို့ နဲ့ ဝေးသွား
,,,,,,,,,ဝေးရင်း ဝေးရင်း ဝေးရင်းဝေးရင်း။
September 6, 2012	chit thu	#
ပရိတ်သတ်များ စိတ်ရှည်သီးခံ အားပေးကြပါ ခင်ဗျာ ….Visa သက်တမ်း ၂၁ ရက်ပြည့် တဲ့ နေ့မှာ America ပြန်ခွင့်ပေးမြည်မဟုတ်ပါ ….. အင်းစိန်ထောင် မှ လှိုက်လှဲ စွာ ကြို ဆိုနေ မှာပါ……….
September 6, 2012	Htoo Kyaw	#
အောင်ဝေးက အောင်ဝေးပဲ ။ မိုးသီးဇွန်က မိုးသီးဇွန်ပဲ။
September 6, 2012	Thi Mar	#
နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ရေထဲ၊ လေထဲ၊ နေပူထဲမှာ ပစ်ချခံခဲ့ရလည်း
မွေးကတည်းက ဘ၀ဆိုတာ ဒဏ်ရာတွေချည်းလားဆိုတတဲ့အသိနဲ့
လူဖြစ်စ အခု လူငယ်လေတွေ
ပြောင်းပြန်ပြန်ထားပြီးသား သမိုင်းစာအုပ်ကိုပဲ တစ်လုံးမကျန် အလွတ်ကျက်
တစ်လုံးမှား မင်နီတစ်ချက်တားတဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့
အနာဂတ်ဟာ ဝေးကွာခြင်းနဲ့ အမုန်းတရားလား။
အမှောင်ထဲမှာ ခေါင်းညိမ့်ယုံသာတတ်တဲ့ အလိမ်မာတုံးလေးတွေကို
အမှန်တရား၊ အလှတရားနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း
ထိတ်တလန့်လန့် အိပ်မက်ဟောင်းတွေ ယူလာလိုက်နဲ့
ထိပ်တန်းကဗျာဆရာ(၅၀)စာရင်းမှာ ပါမပါ ကျွန်မ မပြောတတ်ဘူး
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး
ကလေးဘ၀ကတည်းက တစ်ခါမှ မစားဘူးသေးတဲ့မုန့်ပဲ
ပုံနှိပ်စာလုံး မပီသတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ
မြန်မာကဗျာ ပီပီသသမဖတ်တတ်တဲ့ မြန်မာပေါက်စလေးတွေ
ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ မြိန်မြိန်ကြီး စားဖူးချင်တယ်
ကျွန်မလိုပဲ ဒီကကလေးအားလုံးဟာ ဒါကိုဆာလောင်နေတယ်။
ပထမတန်း၊ သင်းခန်းစာ (၇)၊ ဖတ်စာ (၇)
ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်း ကြောင့် အိမ်မှာ
နောက်ပြန်ဖွင့်တော့ သမိုင်းဖတ်စာ စောက်ထိုးဖတ်ပြီး ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့
ဘ၀မှာ နားထောင်ပြီး ခေါင့်ညိမ့်တတ်ဖို့ပဲ အသင်ခံခဲ့ရတယ်
လယ်ယာမဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ထမင်းအိုးဗလာကိုဖတ်တတ်ခဲ့မိတာ
လုံမစုံတဲ့ မိသားစုကဗျာကို ဖတ်ခဲ့မိတာ-
အလွမ်းနဲ့ပဲ သူ့ကို ငေးကြည့်နေရတာ
ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ စောင့်ပါဦးလားကွာ ဆိုရင်
ဆဲသံဆိုသံတွေကို ခဏတော့ သည်းခံပါစေအုံးလား
ဒီလို မိဘ၊ မောင်နှမမစုံဘဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ။
တစ်ရပ်တစ်ရွာကိုရောက်ရင်တောင် ဆွေမျိုးဟောင်းကို လိုက်ရှာနေတတ်တာ
ချစ်ခြင်းကို ဝေးအောင်လုပ်အုံးမှာလား ဖြေပါ။
( “စာလုံးတယ်မလှပေဘု မိန်းမလက်ရေး” ဆိုသလို ကျွန်မက ကဗျာဆရာမဟုတ်လို့ ဒီဟာကလည်း ကဗျာလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ…. မြန်မာပြည်က လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အသံကို ကြားရရင်ပဲ တော်ပါပြီ)
September 6, 2012	khin gyi dwe	#
all are good comment that’s hit something
September 7, 2012	Comments are closed.
Graphic showing current human rights concerns in Myanmar. #Malala Day Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,511,657 hits
I saw my reflection inaglass door of Michael Mann studio at Santa Monica, wow I was young enough. Photography by D… lnkd.in/bKVcdAu3hours ago
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP4hours ago
Hezbollah official Hassan Al-Laqees assassinated outside his Beirut home, says Hezbollah-run Al Manar television.2days ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesMyanmar refugees face land challenges on returnSpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks greater Myanmar military trainingICRC trains surgeons in restive MyanmarWant Burma info in your inbox each morning?